BaH2 → H2 + Ba
Biyo-biyoodka; Cusbada barium Dihydrogen hydrogen barium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta BaH2 → H2 + Ba
Waa maxay xaalada falcelinta BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt)?
Heerkulka: > 675
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo Ba (barium)?
Dhacdada ka dib BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium cusbo)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda BaH2 (Barium hydride; milix barium Dihydrogen), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada BaH2 → H2 + Ba
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt) sida falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Ba ​​(Barium hydride; Dihydrogen barium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba (barium) badeecad ahaan?
2Al + 4BaO → 3Ba + Ba (AlO2)2
aluminium xabagta barium barium
2 4 3 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 4BaO → 3Ba + Ba (AlO2)2
Waa maxay xaalada falcelinta Al (aluminium) kaga falcelisa BaO (barium oxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Ba (barium) iyo Ba(AlO2)2 ()?
Dhacdada ka dib Al (aluminium) waxay la falgashaa BaO (barium oxide)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Beam (barium oxide), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 4BaO → 3Ba + Ba (AlO2)2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Ba ​​(barium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba (barium) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Ba(AlO2)2 (barium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba(AlO2) 2 () badeecad ahaan?
xabagta barium silicon barium Barium metasilicate; Cusbada barium ee metasilicic
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3BaO + Si → 2Ba + BaSiO3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee BaO (barium oxide) waxay kaga falcelisaa Si (silikon)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Ba (barium) iyo BaSiO3 (Barium metasilicate; Metaasilicic acid barium salt)?
Dhacdada ka dib BaO (barium oxide) waxay la falgashaa Si (silikon)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3BaO + Si → 2Ba + BaSiO3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Ba ​​(silikon)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba (barium) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaSiO3 (silikon)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaSiO3 (Barium metasilicate; Metaasilicic acid barium salt) badeecad ahaan?
xabagta barium hydrogen biyaha barium
(trung) (xoog leh) (xoog leh) (xaq xám)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta BaO + H2 → H2O + Ba
What is reaction condition of BaO (barium oxide) reacts with H2 (hydrogen) ?
How reactions can happened and produce H2O (water) and Ba (barium) ?
Phenomenon after BaO (barium oxide) reacts with H2 (hydrogen)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada BaO + H2 → H2O + Ba
What are the chemical and physical characteristic of Ba (hydrogen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba (barium) badeecad ahaan?
xabagta barium carbon monoxide barium carbon dioxide
(trung) (xoog leh) (xaq xám) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta BaO + CO → Ba + CO2
Waa maxay xaaladda falcelinta BaO (barium oxide) ee CO (carbon monoxide)?
Dhacdada ka dib BaO (barium oxide) waxay la falgashaa CO (carbon monoxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada BaO + CO → Ba + CO2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Ba ​​(carbon monoxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba (barium) badeecad ahaan?